Tag: word api
Maxaan ugula talinayaa Shirkadaha SaaS inay ka hortagaan Dhisida CMS-kooda
Saaxiibad la ixtiraamo ayaa iga soo wacday hay'ad suuq-geyn ah oo weydiineysa xoogaa talo ah iyada oo la hadlaysa ganacsi dhisayay bartiisa internetka. Ururku wuxuu kakoobanaa horumariyayaal tayo sare leh waxayna u adkaysanayeen adeegsiga nidaamka maaraynta maaddada (CMS)… taa badalkeedana waxay wadeen inay hirgeliyaan xalka gurigooda ku koray Waa wax aan hore u maqlay… caadi ahaanna waan kula taliyaa. Horumariyayaashu waxay badanaa rumeysan yihiin in CMS si fudud loo kaydinayo
Waxaad ku ogaan doontaa bogga koowaad ka dib boostada ugu horreysa ee boggeyga gurigeyga inaan ku daray kartoon Blaugh ah. Waxaan haystay hal waqti oo waqti ah oo aan ku ogaanayo sida si fudud loogu muujiyo kartoonka hal meel oo kaliya oo goobta ku yaal anigoon ku riixin dhinaca dhinaceeda halka uusan ka tirsanayn. Marka… Waxaan sameeyay xoogaa qodis waxaana helay dhowr mowduuc oo ka faa'iideysanaya koodh si aan tan u sameeyo. Koodhku wuu kari karay